माल्दिभ्समा खुलेकी मौनी, संजालमा सर्वाधिक चर्चा ( तस्बिरमा हेर्नुहोस् ) - News Bihani
बिश्वब्यापी फैलिएको कोरोनाका कारण भएको लकडाउन सकिए संगै बलिउडमा सुटिङ्ग सुरु भएको छ। कतिपय भने बिदा मनाउन बाहिर गएका छन् । यतिबेला मौनी राय र मन्दिरा बेदी भने छुट्टी मनाउन माल्दिभ्समा पुगेका छन् । यी दुबैले बिदाको भरपुर उपयोग गर्दै आफ्नो चटक्क परेको एकदम राम्रो फोटो शेयर गरेका छन् । जसमा उनीहरु एकदम खुशी देख्न सकिन्छ ।
उनीहरु दिल खोलेर रमाएका छन् । सोशल मिडियामा मौनीले आफ्नो तस्बिर पोष्ट गरेकी छन् । उनीहरुले बिदामा भरपुर रमाइलो गरेको तस्बिरबाट देख्न सकिन्छ । अलग-अलग पोज दिएर खिचिएको तस्बिरले धमाका मच्चाइरहेको छ । उनले पहिले पनि बिदामा आफ्नो तस्बिर सेयर गरेकी थिइन् । माल्दिभ्सको कयौ राम्रो लोकेशनमा उनले फोटो सुट गरेकी छिन ।
आफ्नो जन्मदिन मनाउन माल्दिभ्स गएकी थिइन् । उनलाई फेरी एकपटक ग्यामरमा देख्न सकिन्छ । उनको संजालमा खुब तारिफ गरिएको छ । उनी ७ महिनापछि खुलेको लकडाउनको भरपुर उपयोग गरि फेरी पहिलेकै अबस्थामा फर्कने प्रयास गर्दैछिन् ।
आइतवार, आश्विन २५ २०७७०५:५५:२०
# बलिउड # मौनी राय
ड्रग्स प्रकरण : राखी सावन्तलाइ आएको थियो यस्तो प्रस्ताव!
दीपिकाले स्विकारिन् ‘ड्रक्स च्याट’को आरोप
एनसीबीले दिपिकालाई भन्यो, इमोस्नल कार्ड नखेल्नु!
अभिनेत्रीलाइ आयो ज्यान मार्ने धम्की !